Ireo mpandraharaha mpizahatany Tanzania dia mamoaka ny karipetra mena ho an'ireo mpiasan'ny dia iraisam-pirenena
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Tanzania » Ireo mpandraharaha mpizahatany Tanzania dia mamoaka ny karipetra mena ho an'ireo mpiasan'ny dia iraisam-pirenena
Vaovao Mafana • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Vaovao Mafana Tanzania • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Ireo mpandraharaha mpizahatany dia manala ny karipetra mena ho an'ireo masoivohon'ny fizahantany iraisam-pirenena satria ho avy tsy ho ela ao Tanzania ao anatin'ny drafitra lehibe hamerenany ny indostrian'ny fizahantany mitentina miliara dolara amin'ny areti-mandringana taorian'ny COVID-19.
Fialan-tsasatra amin'ny onjan'ny Coronavirus mahery setra, ny fizahantany dia indostria mandroso vola any Tanzania.
Izy io dia mamorona asa mendrika 1.3 tapitrisa, miteraka 2.6 miliara dolara isan-taona, mitovy amin'ny 18 ary 30 isan-jaton'ny harin-karena faobe sy ny tapakila fanondranana.
Tanzania Association of Tour Operators (TATO) dia miasa mandrakariva amin'ny anaran'ny mpikambana 300-plus hitondra am-polony ireo maso ivoho amin'ny faran'ny volana septambra 2021.
“Mamelatra kidoro fandraisana ho an'ireo masoivoho mpandeha eran-tany am-polony izahay, ao anatin'ny paikady vaovao hivarotana ny toerana alehantsika aorian'ny [areti-mifindra] COVID-19,” hoy ny Tale jeneralin'ny fikambanana, Andriamatoa Sirili Akko.
Ny masoivoho, na ny ankamaroan'izy ireo ankehitriny dia maniry - mpanolotsaina na mpamorona fitsangatsanganana - dia mivarotra ny toerana itodiana fizahan-tany ary manamora ny fizotran'ny drafitry ny fizahan-tany ho an'ireo mpizahatany, ankoatran'ny fanomezana serivisy fakan-kevitra sy fonosana momba ny dia manontolo.
"Ny drafitray [dia] hitondra 300 ny maso ivoho mpizahatany iraisam-pirenena mandritra ny 12 volana ho avy, mitovy amin'ny mpandraharaha 25 isam-bolana, hijerena sy hiaina ny fomba ahazoana Tanzania hatsarana voajanahary tsy manam-paharoa," hoy Andriamatoa Akko.
Eo ambanin'ny fanohanan'ny Firenena Mikambana momba ny fampandrosoana (UNDP), Nandany vola be ny TATO eo amin'ny lafiny fotoana, fahaiza-manao ary vola hametrahana an'i Tanzania ho toeran-tokana azo antoka sy lafo vidy ao anaty tetik'asa avo lenta hanentanana ireo mpandeha avo lenta ao amin'ny firenena amin'ny alàlan'ny paikady ara-barotra lasibatra amin'ny tsena lehibe maromaro.
Ny valim-pikarohana Allied Market Research dia mampiseho fa ny tsena fizahan-tany manerantany dia hahatratra $ 1.2 trillion amin'ny vanim-potoana 2021-2027 miaraka amin'ny tahan'ny fitomboana 11.1 isan-jato isan-taona.
Ny tanjona dia ny hitazomana ny famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny fizahan-tany marary ho fanetsehana orinasa hafa, famerenana ireo asa very an'arivony ary hiteraka fidiram-bola ho an'ny toekarena.
Nahagaga ny drafitra hitondrana ireo masoivohon'ny fizahantany manerantany ho any amin'ny firenena, satria manandrana manovaova ny paikadim-barotra ireo mpandraharaha mpizahatany mba hisarihana mpitsidika bebe kokoa sy ampio ny isan'ny fizahan-tany hiaina ny fanafihana mahery vaika avy amin'ny toerana hafa any amin'ny areti-mandringana taorian'ny COVID-19.
Nilaza ny mpandinika ny fizahantany fizahan-tany fa ny ezaka, raha ny marina, dia manolotra fiovana manan-tantara amin'ny paikady ara-barotra, satria ny fomba fanaon'ireo mpiandraikitra fizahan-tany dia mitodika any amin'ny fivezivezena any ivelany mba hampiroboroboana ny fizahan-tany fizahan-tany ho an'ny firenena amin'ny ambaratonga lehibe kokoa.
Ny filohan'ny TATO, Andriamatoa Wilbard Chambulo, dia nilaza fa ny fikambanany dia niasa tamina hetsika maro hananganana ny indostrian'ny fizahan-tany.
“Namorona hevitra hanovana ny paikady izahay, satria misy dikany bebe kokoa ny marketing sy ny toekarena ny mitondra ireo masoivohon'ny fizahan-tany hahita topy maso ireo zava-mahasarika voajanahary natolotry ny firenena toy izay ireo mpikambana ao aminy hanaraka azy ireo any ampitan-dranomasina miaraka amina sary mihetsika sy mampihetsi-po, indrindra fa amin'ny ny vokatry ny valanaretina COVID-19, ”hoy Atoa Chambulo nanamarika.
TATO, miaraka amin'ny Ministeran'ny Fahasalamana, vao haingana no namoaka ny vaksinin'ny vaksiny COVID-19 betsaka indrindra izay nahitana mpiasa an'arivony maro eo amin'ny sehatry ny fizahantany nahazo jabs talohan'ny vanim-potoana tampon'ny fizahan-tany.
Ny fikambanana dia namolavola ihany koa ny fanohanana fotodrafitrasa ara-pahasalamana fototra amin'ny boriborintany fizahan-tany manan-danja, izay mitaky zavatra hafa, ny fananana fiara mpamonjy voina eny an-kianja, ny fifanarahana amin'ireo hopitaly sasany hampiasaina ho an'ny serivisy mpizahatany raha sendra misy fifanolanana, ary mampifandray ilay tetikasa amin'ny serivisy dokotera manidina - eo amin'ny ezaka hamelomana indray ny indostrian'ny fizahantany.
Vao tsy ela akory izay, ny TATO dia nahavita namoaka, niaraka tamin'ny governemanta, foibe fanangonana santionany COVID-19 ao Kogatende sy Seronera ao afovoany sy avaratry Serengeti.
Soa ihany fa ireo ezaka ifotony ireo dia nanomboka nandoa dividends tamin'ny alàlan'ny fibaikoana ny fifamoivoizana sy ny fanentanana ny famandrihana vaovao ho an'ny mpikambana TATO.
Nanambara ny seranam-piaramanidina malaza any Suisse, Edelweiss, fa hanampy an'i Kilimanjaro, Zanzibar, ary Dar es Salaam ho toeran-kaleha vaovao 3 any Tanzania manomboka ny volana Oktobra, manome taratra fanantenana ho an'ny indostrian'ny fizahantany.
Edelweiss, rahavavy iray an'ny Swiss International Air Lines ary mpikambana ao amin'ny Lufthansa Group, dia mirehareha amin'ny tobin'ny mpanjifa efa ho 20 tapitrisa manerana an'izao tontolo izao.
Arif Ahmad hoy:
26 Aogositra 2021 amin'ny 12:10
Salama tompoko / Ramatoa mankasitraka izahay raha azonao atao ny manampy anay fa tsy manana mpanjifa izahay hatramin'ny roa taona lasa izay manana trano fandraisam-bahiny tsara tarehy telo any atsimon'i Tanzania aho 🇹🇿 azafady 🙏🏼